ဒူဒူကြီး: Photoelectric sensor (၃)
Retro-reflective sensors တွေမှာ၊ emitter နဲ့ receiver တို့ကို၊ sensor housing တခုထဲမှာ အထက်နဲ့အောက် အနေအထားတတ်ဆင် ထားပါတယ်။ emitter မှထုတ်လွှင့်လိုက်တဲ့ light beam ဟာ၊ reflector ကိုသွားထိပြီးမှ၊ receiver သို့ပြန်သွားပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် sensing object ကိုထိတွေ့ပြီးမှ၊ reflector ရဲ့ မျက်နှာပြင်ကိုထပ်မံထိတွေ့ကာ၊ ပြန်လင်းတန်းအဖြစ်၊ receiver သို့သွားတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ receiver မှလက်ခံရရှိမယ့် reflective light beam ရဲ့ ligh intensity ဟာကျသွားပြီး၊ intensity အပြောင်းအလဲကို၊ detect လုပ်ပါတယ်။
Fig. Retro-reflective sensor
sensing distance အနေနဲ့ စင်တီမီတာအကွာအဝေးအနည်းငယ်မှ၊ (၁၀) မီတာအကွာဝေးတွေအထိ၊ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ sensing object ရဲ့ အရောင်နဲ့ အစောင်းအနေအထား angle တွေဟာ၊ light beam ကိုအနှောက်အယှက်မပေးသလို၊ အလင်းတန်းဟာ transparent ဆိုတဲ့၊ အလင်းပေါက်အရာဝထ္တုအတွင်း၊ ဝင်ရောက်ပြီးမှ၊ reflected light beam အဖြစ်၊ အလင်းပြန်တဲ့အတွက်၊ transparent sensing object တွေကိုပါ၊ detect လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် mirrored finished လို့ခေါါတဲ့၊ မှန်လို shiny surface objects တွေကိုတော့၊ detect မလုပ်နိုင် တာတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီအခါ polarization filters တွေကို၊ ထည့်သွင်းအသုံးပြုကြပါတယ်။
Fig. Polarized retro-reflective sensor
emitter မှ၊ ထုတ်လွှင့်လိုက်တဲ့ light beam ဟာ shiny object နဲ့ထိတွေ့ပြီး၊ reflector မှတဆင့်၊ receiver သို့၊ reflected light အနေနဲ့ ပြန်လာတဲ့အခါ၊ phase pattern ပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်၊ polarization filters တွေကို၊ ထည့်သွင်း အသုံးပြုခြင်းလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ polarized retro-reflective sensors တွေကို၊ short distance sensing အတွက် အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး၊ reflector အဖြစ် corner cube reflectors တွေကိုသုံးတဲ့အခါ၊ parallel axis အနေနဲ့ အလင်းပြန်တဲ့အခါ၊ ပြန်လင်းတန်းရဲ့ အလမ်းပြန်မှုစွမ်းရည်ပိုမိုကောင်းမွန်လာတာတွေ့ရပါတယ်။
Fig. Diffuse-reflective sensor
Diffuse-reflective sensors တွေမှာ၊ emitter နဲ့ receiver တို့ကို၊ sensor housing တခုထဲမှာ အထက်နဲ့အောက် အနေအထား တတ်ဆင် ထားပေမယ့်၊ Retro-reflective sensors တွေလို၊ reflector တတ်ဆင်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။ emitter မှထုတ်လွှင့်လိုက်တဲ့ light beam ဟာ၊ sensing object ကိုထိတွေ့ပြီး၊ ပြန်လင်းတန်းအဖြစ်၊ receiver သို့တိုက်ရိုက် အလင်းပြန်သွားပါတယ်။ light beam ဟာ object နဲ့ထိတွေ့စဉ်၊ light intensity မြင့်တက်သွားပြီး၊ intensity အပြောင်း အလဲကို၊ detect လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ sensing object ရဲ့ color နဲ့ surface smoothness တို့ဟာ၊ reflected light ရဲ့ intensity နဲ့ operating stability တို့အပေါါမှာ၊ သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
Reference : Marine Electrical & Automation Course - (ဦးခင်မောင်ဦး၊ အချိန်ပိုင်း ကထိက၊ စက်မှုဌာန၊ ရေကြောင်းပညာသိပ္ပံကျောင်း), Technical Guide - OMRON Industrial Automation, Australia,
Image credit to : http://www.omron.com.au/, http://www.prothermind.com/, http://www.automation.com/, http://www.sensorsmag.com/